Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad - Soo-saareyaasha Alaabada Shiinaha
Warshadu waxay ka kooban tahay nidaamka wax lagu barto, nidaamka miisaanka, nidaamka isku qasida, nidaamka korontada lagu xakameeyo, nidaamka xakamaynta pneumatic iyo iwm. Saddex isu geyn, mid budo ah, hal dareere lagu daro iyo biyo ayaa si otomaatig ah loo miisaami karaa uguna qasmi karaa geedka.
Isku-habboonaanta iyo kala-goynta, dhaqdhaqaaqa sare ee kala-guurka, habboon oo dhakhso leh, iyo la-qabsiga goobta shaqada oo qumman.
Qaab dhismeedka aasaasiga ah ee aasaasiga ah, qalabka waxaa lagu rakibi karaa wax soo saar ka dib marka goobta shaqada la simo oo la adkaado. Ma aha oo kaliya in la dhimo qarashka dhismaha, laakiin sidoo kale la gaabiyo wareegga rakibidda
Xawaare-xawaare sare tareenka u go'an warshad batching la taaban karo
Qaadashada isku-darka wax-ku-oolnimada sare, wax-soo-saarka wax-soo-saarka sarreeya, taageeridda noocyo badan oo tiknoolajiyadeed oo quudin ah, oo ku habboon baahiyo isku-dhafan oo kala duwan, looxyada dusha sare iyo garbaha ayaa korsada alaab duug ah oo adkaysi u leh, oo leh adeeg dheer.
Shekeysan Horizontal waa nooc ka mid ah gawaarida sambabaha oo leh qaab dhismeed horumarsan, wuxuu leeyahay waxtarka sare ee soo dejinta iyadoo la adeegsanayo dareeraha dareeraha iyo tiknoolajiyada quudinta iyo sariirta dareeraha ah ee gaarka ah.
SjGJD060-3 Nooca Tallaabooyinka Dufan ee Qalalan Madaafiic
SjGJD060-3G noocyada tallaabada madaafiic qalalan ah waxay qaadataa qaab-dhismeedka tallaabo-tallaabo ah, oo leh astaamo wax soo saar ballaaran, xasillooni iyo kalsooni, waxaana loo isticmaali karaa isku darka madaafiic caadi ah iyo hoobiye khaas ah oo khaas ah.
[Nuqul] Kala-saaraha ciidda
Qaadashada tiknoolajiyada isku dhafan ee kala-goynta durbaanka iyo kala-soocidda iyo kala-soocidda, iyo sii wadida kala-goynta sandstone-ka; iyadoo si fudud loo qaabeynayo, saamayn si fiican loo kala soocayo, kharash yar iyo faa'iido wanaagsan oo laga helayo ilaalinta deegaanka.
Gawaarida Gawaarida Gawaarida 4 × 2
Shantui Janeoo waxay soosaaraysay soona saareysay isku darka gawaarida la taaban karo ilaa 1980-yadii. Waxay soo uruurisay khibrad hodan ah oo ku saabsan qaabeynta, wax soo saarka iyo adeegga iibka kadib.
SjGTD060-3G Nooca Nooca Dhismaha Warshadda Dufan ee Qalalan
Qalabka bateriga Sjgtd060-3g qalalan wuxuu qaataa qaab dhismeedka munaaradda, oo leh wax soo saar ballaaran, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, astaamo xasilloon oo la isku halleyn karo, oo inta badan loo isticmaalo isku-darka madaafiic caadi ah oo qallalan.
Gawaarida Gawaarida Gawaarida 6 × 4
1234 Xiga> >> Bogga 1/4